ဘတ်ဂျက်အားဖြင့်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကိုဘယ်လို | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
တစ်ဦးကဘတ်ဂျက်သငျသညျလစဉ်လတိုင်းရှိသည်နှင့်သင်ငှားပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ငွေဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ပိုက်ဆံတစ်ဦးခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်, utilities, အစာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အဝတ်အစား, စသည်တို့ကို. ဒါဟာသင်ပိုက်ဆံထဲကအပြေးခြင်းမရှိဘဲသုံးဖြုန်းနိုင်သလဲဆိုတာကိုတွက်ကူညီကြမည်. Havingabudget also makes it easier to save money.
Makealist of monthly or weekly expenses: အစာ, utilities, rent, bus fare or car loan for example
Makealist of other expenses you have to pay: အာမခံ, repair bills, school expenses
If you have some money left over after your expenses are covered, start saving! The best way to save money is by putting it into your savings account. သငျသညျအရေးပေါ်ရှိပါကသင်သည်သင်၏ငွေစုကိုသုံးနိုင်သည်. ကျွမ်းကျင်သူများသင်ခြောက်လညီမျှအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေဖန်တီးအကြံပြု’ သင်သည်သင်၏အလုပ်ဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရသူရသည့်ဖြစ်ရပ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်. သငျသညျအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတက်ဆောက်ပြီးနောက်, ထို့နောက်သငျသညျအရာတစ်ခုခုပျော်စရာလုပ်ဖို့ပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ, ကဲ့သို့သင်၏မိသားစုနှင့်အတူတစ်အားလပ်ရက်အပေါ် go သို့မဟုတ်အထူးတစ်ခုခုဝယ်ဖို့.
သင်သည်သင်၏အကြွေးကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်အချိန်ပေါ်တွင်သင်၏ဥပဒေကြမ်းများအပေါငျးတို့သပေးဆောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျတစျနေ့တအိမ်ဝယ်ဖို့လိုလျှင်, သငျသညျအကြွေးသုံးစွဲဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ more about credit cards and loans.
In the USA, လူတိုင်းဧပြီလအားဖြင့်အစီရင်ခံရန်လိုအပ်ပါသည် 15 every year how much income they received in the year before. အဲဒီအစီရင်ခံစာဟာအခွန်ပြန်လာဟုခေါ်သည်. You may owe taxes on that income. အခွန်သင်လက်ခံရရှိအများပြည်သူန်ဆောင်မှုများအတွက်အစိုးရပေးဆောင်ကြောင်းပိုက်ဆံများမှာ, သင့်ရဲ့ကလေးများနှင့်လမ်းများပေါ်တွင်မောင်းနှင်ရန်အဘို့အကျောင်းမှာတူသော. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ more about taxes and how to pay taxes. သငျသညျလုပ်ငွေဘယ်လောက်ပေါ် မူတည်., သို့သော်, သင်တစ်ဦးပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံရရှိစေခြင်းငှါ, (နောက်ကျောကအစိုးရအနေဖြင့်ပိုက်ဆံ) အခွန်ပေါ်တွင်သင်ပြီးသားယခုနှစ်ကာလအတွင်း paid.
သင်တစ်ဦးလစာလက်ခံရရှိသည့်အခါ, အချို့ပိုက်ဆံအချို့အခွန်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကထဲကယူပါလိမ့်မည်. Your employer will keep some money from your paycheck to give to the government on your behalf. This called withholding taxes. This includes state and federal taxes, unemployment insurance and social security, အငြိမ်းစားသို့မဟုတ်မသန်မစွမ်းများအတွက်ငွေစုထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်.
This isasample paycheck from the Wells Fargo “ဘဏ်လုပ်ငန်းအပေါ်လက်စွဲ” အစီအစဉ်.